हाम्राे पिपलबाेट » दशैँमा पनि विदेशिनु पर्ने बाध्यता ,बेरोजगारीको समस्या दशैँमा पनि विदेशिनु पर्ने बाध्यता ,बेरोजगारीको समस्या – हाम्राे पिपलबाेट
दशैँमा पनि विदेशिनु पर्ने बाध्यता ,बेरोजगारीको समस्या
स्वदेश र गन्तव्य दुवैमा एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्को मुखैमा आएको दशैँको रौनक । यस्तो परिस्थितिमा पनि विदेश जाने लर्को बढ्दै छ । लामो समयसम्म घरमा बेरोजगार बस्दा जीवन धान्नै धौ–धौ हुन थालेपछि धेरै नेपाली युवा दशैँको मुखैमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै छन् । कोरोनाको डर र दशैँ मान्ने रहर हुँदाहुँदै पनि धेरै युवालाई कामको खोजिमा जानुपर्ने बाध्यता परेको हो । यस्तैमध्येका हुन सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपालिका प्रकाश वि.क. । गत फागुनमा भारतबाट तीन महिनाको घर बिदामा आएका वि.क गत जेठमै जानुपर्ने हो तर कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी हुँदा उनी नेपालमै रोकिए । १६ वर्षदेखि भारतको विद्युत सव स्टेशनमा कार्यरत वि.क. भारतिय सरकारी जागिरमा आवद्ध छन् । भारतबाट आउने–जाने गरिरहेका वि.क. भन्छन् , कोरोनाको बढ्दो त्रास र मुखैमा आएको दशैँ नमानी जाने रहर त कहाँ थियो र ! भर्खर घर बनाउँदै छु, ऋण लागेको छ, नगएर के गर्नु ?”
उनीजस्तै कालिकोटका मुकेश शाही विदेशको रोजगारी गुम्ने चिन्ताले मुखैमा आएको दशैँ छोडेर हिँडेको जानकारी दिए । भिसाको म्याद पनि सकिँदै छ । कम्पनीबाट पनि अहिल्यै आउन भनेको छ, त्यसैले जान लागेको, उहाँले निराश हुँदै भने हामीले विदेशमा सिकेको सीप लगाउने कुनै ठाउँ छैन यहाँ । जहाँ पनि आफूले चिनेको मान्छे भए मात्र काम बन्छ । त्यसैले यहाँ केही गर्न सकिन्नजस्तो लाग्यो । ” रोजगारीको खोजीमा मलेसिया र खाडी मुलुकमा जानु धेरैको बाध्यता हो । गाउँमै, देशमै बस्दा पुग्ने भए किन परदेशिन पथ्र्यो होला र ! त्यसैमाथि एकातर्फ कोरोनाको त्रास अर्कोतर्फ मुखैमा आएको दशैँ छोडेर ।
गन्तव्य देशमा कोरोना जोखिम बढेपछि सरकारले गएको फागुन अन्तिमदेखि श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । झन्डै चार महिनापछि गएको असारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र भदौदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । गत असारदेखि असोजसम्म १५ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिइसकेको वैदेशिक रोजगार विभाग बताउछ् ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलका अनुसार असोजमा मात्रै आठ हजार ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसअघि असारमा दुई हजार ४९४, साउनमा दुई हजार ९७९ जना र भदौमा एक हजार ५२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो कार्यालयका अनुसार असोजमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सात हजार ६७६ पुरुष र ४२१ महिला छन् । चार हजार ५०५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति, ४०१ जनाले वैधानीकरण गरेर र ५१६ जनाले व्यक्तिगत तवरले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । असोजमा वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई श्रम लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी साउदी अरबका लागि दुई हजार ८३१ जना छन् । त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि दुई हजार ६५१ जना, कतारका लागि एक हजार ३५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।